DG3Pros —- Kacha mma APS-C drone oblique igwefoto ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Egwurugwu
Họrọ igwefoto kwesịrị ekwesị na ọkachamara maka drones gị
ntụkwasị obi dị elu, ọrụ dị mfe, ọnụego mmepụta hing na ngwa sara mbara
uru nke ịdị arọ, obere nha, ezi uche dị na ogologo, ntụkwasị obi dị elu na oke .DG3 PROS nwere ike ịdakwasị na multi-rotor na drones-fix drones maka nnweta data nnweta data. Dị ka igwefoto APS-C nke kachasị dị na ahịa, RIY-DG3 PROS nwere ọkụ na-ekpo ọkụ na sistem mwepụ nke uzuzu, nke nwere ike ịme ka ọ dịkwuo mma iji gbanwee ọnọdụ. belata mgbasa ahụ site na iji teknụzụ nke APO (Apochromat).
Kedu ihe bụ usoro nke ozi ndu? Kedu ka m kwesiri isi jiri ya mee ihe?
na usoro nke raw foto bụ .jpg.
Ọ na-abụkarị mgbe anyị gbasịrị ụgbọ elu, anyị kwesịrị ibudata ha na igwefoto, nke chọrọ sọftụwia anyị mepụtara "Sky-Scanner"
Kpọtụrụ anyị ka ịmatakwu banyere raw foto>
Usoro nwụnye na nyiwe dị iche iche ma ọ bụ UAV guzobere nku ma ọ bụ obere ụgbọ elu?
Enwere ike idozi RIY-DG4 PROS na multi-rotor na drones nke a na-edozi maka nnweta data nnweta oblique .N'ihi njikwa njikwa, nnyefe data na usoro ndị ọzọ dị n'ụdị, yabụ ọ dị mfe itinye ma dochie ya. na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ, ma otu akụkụ na multi-rotor na VTOL na helikopta, ọ tụgharịrị na ha niile na-emegharị nke ọma.
Gịnị mere mmekọrịta nke lenses ise ji dị mkpa?
Anyị niile maara na n'oge ụgbọ elu na-efe efe, a ga-enye mgbaàmà na-akpali akpali na anya ise nke igwefoto obique. Na tiori, enyo anya ise kwesiri ikpughe synchronously, mgbe ahụ, a ga-edekọ data POS n'otu oge.
Ma mgbe nyochachara, anyị ruru nkwubi okwu: ihe ọmụma dị mgbagwoju anya nke ihe nkiri ahụ, data data nke lens nwere ike idozi, mpikota onu, na ịchekwa, na oge ọ ga - ewe iji mezue ndekọ ahụ.
Ọ bụrụ na etiti oge n’etiti akara mgba ọkụ dị mkpụmkpụ karịa oge achọrọ maka oghere iji mezue ndekọ ahụ, igwefoto agaghị enwe ike ịme ihe ngosi ahụ, nke ga - eme ka “foto efu” pụọ.
BTW，ihe mmekọrịta dịkwa ezigbo mkpa maka mgbaama PPK.
Kedu ọrụ arụmọrụ DG4Pros? Kedu ka m ga esi etinye ntọala dị mkpa?
Flight elu （m）
Gbọ elu ọsọ （m / s）
Mpaghara ụgbọ elu na-alụbeghị di （km2）
Nọmba nọmba elu ụgbọ elu
Onuogugu ugbo elu otu ubochi
Total ọrụ ebe Otu ụbọchị （km2）
※ Parameter table gbakọọ site longitudinal overlapping ọnụego nke 80% na transversal overlapping ọnụego nke 70% （anyị nwere ike ikwu）
Ofu-nku drone + DG4PROS
Otu ụgbọ elu
ebe oru （km2）
Ọnụọgụ nke ụgbọ elu
Total ọrụ ebe
Otu ụbọchị （km2）
Kpọtụrụ anyị iji nweta igodo>
Ihe ịga nke ọma nke eserese foto
—— Jiri 3D nlere mee cadastral nnyocha maka mpaghara dị elu
Mgbe ọtụtụ afọ nke mmepe, ugbu a na China, a na-eji foto oblique eme ihe n'ọtụtụ ebe oru nyocha nke cadastral. Agbanyeghị, n'ihi mmachi nke akụrụngwa akụrụngwa, eserese eserese ka na-esighi ike maka mmụba cadastral nke nnukwu ọdịda, tumadi n'ihi na ogologo mgbado anya na usoro eserese nke oghere igwefoto anaghị erute ogo. Mgbe ọtụtụ afọ nke ahụmịhe ọrụ ngo, anyị chọpụtara na map ziri ezi kwesịrị ịdị n'ime 5 cm, mgbe ahụ GSD ga-adị n'ime 2 cm, na ụdị 3D ga-adị mma nke ukwuu, ọnụ ụlọ ahụ ga-abụ nke ziri ezi ma doo anya.
N'ozuzu, ogologo igwefoto ejiri mee ihe maka oru ngo cadastral bụ 25mm na vetikal na 35mm oblique. Iji mezuo izi ezi nke 1: 500, GSD ga-adị n'ime 2 cm. Na iji hụ na ， ụgbọ elu elu nke drones n'ozuzu n'etiti 70m-100m. Dabere na elu ụgbọ elu a, enweghị ụzọ iji mezue nchịkọta data nke ụlọ ndị dị elu nke 100m. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eme ụgbọ elu, agbanyeghị, ọ gaghị ekwe nkwa idochi elu ụlọ, na-ebute adịghị mma nke ụdị ahụ .Ma n'ihi na ọgụ dị elu dị oke ala, ọ dị oke egwu maka UAV.
Iji dozie nsogbu a, na Mee 2019, anyị rụrụ ule nyocha ziri ezi nke Oblique Photography maka ụlọ elu ndị mepere emepe. Ebumnuche nke ule a bụ iji nyochaa ma nkenke nkewa ikpeazụ nke ụdị 3D nke RIY-DG4pros oblique camera wuru nwere ike iru ihe achọrọ 5 cm RMSE.
2. Usoro ule
Na ule a, anyị na-ahọrọ DJI M600PRO, nke nwere igwefoto mmiri Rain-RIY-DG4pros oblique.
Ebe nyocha na atụmatụ akara atụmatụ
Na nzaghachi nye nsogbu ndị a dị n'elu, na ịbawanye nhịahụ ahụ, anyị họpụtara sel abụọ nke nwere ogo ụlọ dị elu nke 100 mita maka nnwale.
Edebere akara njikwa dị ka map GOOGLE si dị, gburugburu ya kwesịrị ịbụ nke mepere emepe na egbochi ka o kwere mee. Oghere dị n’etiti isi ihe dị na nso 150-200M.
Isi akara bụ 80 * 80 square, kewara n'ime ọbara ọbara na odo dị ka diagonal, iji jide n'aka na a ga-amata ebe etiti ahụ n'ụzọ doro anya mgbe ntụgharị uche siri ike ma ọ bụ na ọkụ ezughi ezu, iji melite ziri ezi.
Iji hụ na nchekwa nke ọrụ, anyị debere nchekwa dị elu nke 60 mita, UAV na-efekwa na mita 160. Iji hụ na ekpuchi elu ụlọ, anyị gbakwara ọnụ ọnụ. Ogologo ogologo ogologo bụ 85% na ntụgharị ntụgharị bụ 80%, UAV na-efekwa na ọsọ 9.8m / s.
Aerial Triangulation (AT) akụkọ
Jiri "Sky-Scanner" (nke Rainpoo mepụtara) sọftụwia iji budata ma bidozie foto izizi, wee webata ha na nghazi ngwanrọ ContextCapture 3D site n'otu igodo.
3D ịme ngosi uwe
Lens agbagọ akụkọ
Site distortion grid esereese, ọ nwere ike hụrụ na oghere distrikti nke RIY-DG4pros bụ nnọọ obere, na secumferensi bụ fọrọ nke nta kpamkpam ukem ini na ọkọlọtọ square;
Ntughari njehie RMS
Ekele maka teknụzụ ngwa anya nke Rainpoo, anyị nwere ike ijikwa uru RMS n'ime 0,55, nke bụ ihe dị mkpa iji dozie usoro 3D.
Mmekọrịta nke oghere ise
Enwere ike ịhụ na ebe dị n'etiti isi okwu nke oghere elekere etiti na isi nke anya anya bụ: 1.63cm, 4.02cm, 4.68cm, 7.99cm, mwepu ezigbo ọnọdụ dị iche, ụkpụrụ njehie bụ: - 4.37cm, -1.98cm, -1.32cm, 1.99cm, ọdịiche kachasị nke ọnọdụ bụ 4.37cm, mmekọrịta mmekọrịta igwefoto nwere ike ịchịkwa n'ime 5ms;
RMS nke akara akara na akara njikwa sitere na 0.12 ruo 0.47 pikselụ.
3. 3D ịme ngosi uwe
Anyị nwere ike ịhụ na n'ihi na RIY-DG4pros na-eji anya elekere ogologo ogologo anya, ụlọ dị na ala nke ụdị 3d doro anya nke ọma. Obere oge ikpughere igwefoto nwere ike iru 0.6s, yabụ ọbụlagodi na ọnụọgụ ogologo nke ogologo na-abawanye na 85%, enweghị ndapụta foto na-apụta. Kwụ ụkwụ nke ụlọ ndị dị elu dị ezigbo mma ma bụrụ nke kwụ ọtọ, nke na-emekwa ka anyị jide n'aka na anyị nwere ike ịnweta akara ụkwụ ziri ezi karịa n'ụdị ahụ.
4. Nyocha ziri ezi
Anyị na-eji ngụkọta ojii na-anakọta ọnọdụ data nke ndenye ego na mgbe mbubata DAT faịlụ na CAD. Wee jiri data gosipụta isi ihe dị na ihe nlere ahụ iji hụ ọdịiche ha.
N'ime ule a, ihe isi ike bụ na nnukwu na ọdịda nke ebe ahụ, nnukwu njupụta nke ụlọ na ala dị mgbagwoju anya. Ihe ndị a ga - eduga na mmụba na nsogbu nke ụgbọ elu, ihe egwu dị elu, na ụdị 3D dị njọ, nke ga - eduga na mbelata nke izi ezi na nyocha nke cadastral.
Ebe ọ bụ na ogologo oge RIY-DG4pros dị ogologo karịa igwefoto a na-ahụkarị, ọ na-ahụ na UAV anyị nwere ike ife efe na oke nchekwa zuru oke, yana nhapụta onyonyo nke ihe ala dị n'ime 2 cm. N'otu oge ahụ, anya elekere zuru ezu nwere ike inyere anyị aka ijide akụkụ ndị ọzọ nke ụlọ mgbe anyị na-efe efe na mpaghara ụlọ ndị nwere nnukwu ụlọ, si otú a na-emeziwanye ụdị 3D. N'okpuru nkwenye na akụrụngwa akụrụngwa niile nwere nkwa, anyị na-emekwa ka mmafe nke ụgbọ elu na nkesa nkesa nke isi akara iji hụ nzi ezi nke ụdị 3D.
oblique foto maka ebe di elu nke nnyocha cadastral, otu ugboro n'ihi enweghị ike nke akụrụngwa na enweghị ahụmịhe, enwere ike ịtụle naanị site na usoro ọdịnala. Ma mmetụta nke ụlọ ndị dị elu na akara RTK na-emekwa ka o sie ike na ezighi ezi nke nha. Ọ bụrụ na anyị nwere ike iji UAV nakọta data, enwere ike iwepụ mmetụta nke ihe ngosi satellite kpamkpam, enwere ike ịmewanye ihe zuru oke. Ya mere, ihe ịga nke ọma nke ule a nwere nnukwu ihe ọ pụtara nye anyị.
Ule a gosipụtara na RIY-DG4pros nwere ike ijikwa RMS n'ezie na obere uru, nwere ezigbo ihe nlele 3D dị mma, enwere ike iji ya rụọ ọrụ nha nke ụlọ ndị dị elu.
Nha igwefoto 130 × 142 × 99.5mm
Ibu igwefoto 710g
Nọmba CMOS 5pcs
Mmetụta mmetụta 23.5 * 15.6mm
Number nke pikselụ (Total) 120 nde
Obere oge ikpughere oge ≤0.8s
Ọnọdụ ikpughe igwefoto Ngosiputa Isochronic / Isometric
Ọnọdụ ike igwefoto Ejikọta ike ọkọnọ
Ntinye data SKYSCANNER (GPS / IMU)
Ikike icheta ihe 640g
Nkọwapụta data ≥80m / s